Klopp oo cadeeyay kooxaha ugu cadcad ee ku guuleysan kara Premier League xilli ciyaareedka cusub – Gool FM
(England) 07 Agoosto 2019. Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa aaminsan in ugu yaraan LIX naadi ay u tartami doonaan hanashada Horyaalka Premier League xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020.
Kooxda Livrpool ayaa xili ciyaareedkii hore waxay ku guuleysatay tartanka Champions League, xili sidoo kale ay booska labaad kaga dhameysteen dhanka kala sareynta Premier League iyagoo ka danbeeyay kooxda difaacaneysa horyaalka ee Manchester City.
Reds ayaa ku soo gali doonta xilli ciyaareedka cusub iyagoo rajeynaya inay gaaraan qaab ciyaareedkoodii ugu fiicnaa, si kastaba ha ahaatee, tababare Juergen Klopp ayaa dareensan in Manchester City aysan aheyn kooxda kaliya ee kula dagaalameysa Liverpool kaalinta koowaad xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020.
Macalinka reer Germany ayaa wareysi uu ku bixiyay telefishanka Sky wuxuu kaga hadlay loolanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka cusub wuxuuna yiri:
“Waxaan dhihi lahaa ugu yaraan lix kooxood ayaa tartameysa, oo ay ku jirto Everton, taasoo loo arko inay tahay koox han weyn oo horumar leh”.
“Ma aqaano sababta dadku ay u shegaan in Arsenal ay ka baxsan tahay loolanka iyo in Chelsea aysan tartami karin kaddib imaatinka Frank Lampard”.
“Waa run in ganaax laga saaray suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda, balse waxaa dib ugu soo laabtay ciyaartoy badan oo qaab amah ah kaga maqnaa”.
Intaas kaddib Klopp ayaa ka hadlay xilli ciyaareedkii cusub ee Liverpool, wuxuu ku jawaabay:
“Waxaan isku dayaynaa inaan horumar sameyno xilli ciyaareedkii hore waan sameynay. Waxay ahayd mid aad muhiim u ah waana u dulqaadanay waqtiyada walaaca badan, waxaan ku qanacsaneyn waxa aan sameeneyno iyadoo ay jiraan waxyaabahan oo dhan”.
“Waxaa jira waxyaabo badan oo aan wali horumarin karno, laakiin marka ugu horeysa, waxaan u baahanahay inaan heerkaas mar kale gaarno, taasi ma ahan mid hubanti ah, suurtogana ma ahan inaad sheegto inaad sameyn kartid”.
RASMI: Kooxda Muqdisho City oo maanta ka duushay Magaalada Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda dalka Zanzibar… + SAWIRRO